व्यक्तिगत विकास योजना - thepersonaldevelopmentcafe.com
तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न व्यक्तिगत विकास योजना
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 25, 2019 | व्यक्तिगत विकास योजना, व्यक्तिगत विकास |0|
1 व्यक्तिगत विकास र व्यक्तिगत विकास योजना
2 ठिक छ अब व्यक्तिगत विकास योजना के हो?
व्यक्तिगत विकास योजना के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ? यस प्रश्नको उत्तर दिनको लागि व्यक्तिगत विकास भनेको के हो भनेर सोधेर सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ?
व्यक्तिगत विकास र व्यक्तिगत विकास योजना
व्यक्तिगत विकास भनेको अगाडि बढ्ने प्रक्रिया मात्र हो। यो आध्यात्मिक रूपमा हुन सक्छ, भावनात्मक हिसाबले, शैक्षिक, शारीरिक, वा व्यावसायिक। के कुरा महत्वका बारे पहिचान गर्न वा तपाईंले निर्धारित गर्नु भएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न व्यक्तिगत विकास योजनाको पहिचान र निर्माणको काम हो।
आफूलाई निरन्तर सुधार गर्ने महत्त्वलाई पर्याप्त जोड दिन सकिदैन। यदि त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन धेरै मानिसहरूले यसको लागि प्रयास गर्छन् सुधार हो। चाहे यो तपाइँको व्यक्तिगत सम्बन्धहरु मा वा तपाइँको व्यावसायिक जीवन मा तपाइँको प्रगति मा व्यक्त गरीएको छ, हामी सबै हामी हुन सक्ने उत्तम व्यक्ति बन्न चाहान्छौं।
तपाईको व्यक्तिगत विकास योजना जटिल हुनुपर्दैन - तपाईले धेरै नमूना पीडी योजनाहरू र नि: शुल्क पीडी योजना टेम्प्लेटहरू अनलाइन उपलब्ध पाउन सक्नुहुन्छ; महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको लागि सही छनौट गर्नु हो।
“तर्कले तपाईंलाई A देखि B सम्म पाउनेछ।कल्पनाले तपाईंलाई जताततै लैजान्छ। ”अल्बर्ट आइन्स्टाइन
ठिक छ अब व्यक्तिगत विकास योजना के हो?
व्यक्तिगत विकास योजना वा PDP आत्म-विश्लेषणको एक विधि हो जुन तपाईंलाई लक्षित र लक्ष्यहरू पहिचान गरेर संरचनात्मक रूपमा सम्भावित अवसरहरू विचार गर्न अनुमति दिन्छ।
आफैलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:
म जीवनबाट के हासिल गर्न चाहन्छु?
म कस्तो प्रकारको मानिस हुन चाहान्छु?
मेरो व्यक्तिगत लक्ष्य र महत्वाकांक्षा के हो?
के म सहिमा पुग्न सही निर्णयहरू गर्दैछु?
एकचोटि तपाईंले आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्य पहिचान गर्नुभयो, तिनीहरूलाई तपाईंको पीडीपीमा हस्तान्तरण गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न तपाईंलाई के कार्यहरू आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
के तपाईलाई कुनै तालिम लिन आवश्यक छ? के तपाइँ त्यो पदोन्नतीको लागि सोध्न तयार हुनुहुन्छ? सायद तपाईंले अब महसुस गर्नुभयो तपाईंको वर्तमान सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गर्ने समय आएको छ? आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्य तिर प्रत्येक चरण पूरा गर्न आफैलाई समय-सीमा सेट गरेर, तपाईंको योजना प्रगतिमा ब्लुप्रिन्टको रूपमा काम गर्दछ।
तपाईंको लेख्दै छोटो अवधि, मध्यम अवधि र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू तपाइँ तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ र तपाइँ यो कसरी गर्नुहुनेछ भन्नेको निरन्तर रिमाइन्डर राख्न अनुमति दिनेछ। तपाइँको योजना नियमित रूपमा अपडेट गर्नाले तपाइँ तपाइँको प्रगति निगरानी गर्न र कुनै पनी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको योजनालाई असर गर्न सक्दछ।
यदि तपाईंसँग राम्रो व्यक्तिगत विकास योजना छ र यसका कार्यहरू पालना गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको क्यारियर र व्यक्तिगत जीवनमा व्यक्तिगत विकास योजनाको फाइदाहरू:
आफुलाई र तपाईले कसरी काम गर्ने बारेमा राम्रो ज्ञान।
सकारात्मक, अगाडि देखिने दृष्टिकोणको विकास गर्दै।
आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न छनौट गर्न राम्रो स्थितिमा हुनु।
तपाईको आवश्यकताको महान् जागरूकता र यी कसरी पूरा गर्ने।
तपाईंले गर्न सक्ने अनुपम योगदानको अझ ठूलो सचेतना।
यदि तपाईं व्यक्तिगत विकास योजनाको साथ थप मद्दत चाहानुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको नि: शुल्क व्यक्तिगत विकास योजना रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईं आफ्नो सपनाहरू साकार बनाउन सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत विकास योजना बनाउनुहोस्.
व्यक्तिगत विकास क्याफेमा हामीलाई थाहा छ कि ज्ञानको साथ गर्नु पर्ने सब भन्दा राम्रो चीज भनेको यसलाई पार गर्नु हो। के तपाइँ अरूलाई मद्दत गर्न तपाइँको व्यक्तिगत विकास योजनाको बारेमा तपाइँको अनुभवहरू साझेदारी गर्न वा तपाइँको ज्ञानमा पार गर्न चाहानुहुन्छ?
के तपाईंसँग कुनै सुझाव छ जुन तपाईंको लागि सफलतापूर्वक काम गरीरहेको छ? सायद तपाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहानुहुन्छ वा तपाईले सोच्नु भएको प्रश्नको उत्तर छ भन्ने लाग्छ। कृपया तल तिनीहरूलाई सबमिट गर्नुहोस् र हामी समीक्षा गर्नेछौं, त्यसपछि तपाईंको टिप्पणीहरू थप्नुहोस्।
पछिल्लोनिद्रा विकारहरू र पोषणको सकारात्मक प्रभाव
अर्कोएक SWOT विश्लेषण तपाईंको व्यक्तिगत विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ
राम्रो व्यक्ति बन्नुको महत्त्व
नोभेम्बर 30, 2019
3 व्यक्तिगत विकास योजनाको चरणहरू
हास्यपूर्ण उद्धरणहरू जसले तपाईंलाई मुस्कुराउँछ